Rehefa resy toy ny mpandresy Jereo — Trip LEE - OFISIALY SITE
Rehefa resy toy ny mpandresy Jereo
Inona no mpandresy mijery tahaka ny? Ve izy ireo lava na fohy? Mainty na fotsy? Mahery, na osa? Heveriko izany dia miankina amin'ny inona no holazaina “mpandresy.”
Ninonoanao aho tao an-tantara ny mpandresy iray ity volana lasa toy ny mamaky lava, fa hanintona filazalazana ny mombamomba ny Michael Jordana. Ny antsipiriany kaonty Nampahatsiahy ahy hoe nahoana ny olona maro no mieritreritra be momba azy mifanolotra mahery fo fanompoam-pivavahana. Zavatra maro no azo lazaina momba “ny airness” fa tsy misy olona afaka milaza ve fa tsy misy mpandresy. Ve izy hijery toy ny mpandresy, fony izy tsy nahazo izay rehetra tompon-daka vava, anefa?
Rehefa mamaky ny boky, dia toa mazava Efa hatramin'ny mbola kely fa ho tompon-daka. Na izay ny tena lalao ho toy ny siny kely ligy na ho toy ny zandriny varsity mpilalao basket; ny lycée Mitombo haingana be, na ny lalao handresy voatifitra nandritra ny taona freshman amin'ny UNC.
Ny fotoana dia tonga ny toko momba ny championships ho Chicago Bull, tsy nisy tsy ampoizina. Nilaza ny mpanoratra ny tantara amin 'ny fomba izay mazava tsara: Jordana teraka ho mpandresy. Ary izay no fantatsika azy: tompon-daka enina nahazo vava, dimy MVPs, ary 14 Star rehetra niseho (tsy lazaina intsony ny unchallenged nanjaka tamin'ny kiraro panatanjahan lalao).
Io karazana unchallenged nanjakan'i no tonga ao an-tsaina matetika rehefa mieritreritra voalohany “mpandresy.” Fa tiako antsika hiala toerana ho an'ny hafa karazana mpandresy. Ny karazana mpandresy izay tsy manana ny makings ny tompon-daka. Ny karazana mpandresy izay manana fahalemena dia niavaka kokoa noho ny hery. Ny karazana mpandresy izay mijery bebe kokoa toy ny resy indraindray.
resy, fa Reseo
Ho tonga toa marina aminareo. Roa taona farany no mahagaga amin'ny fomba maro, fa efa mafy ihany koa ny tarehy. Faly aho ho mafy ny fanambadiana sy ny fiandohan'ny fiainan'izy roa kely. Aho hiaina ny fifaliana avy pastoraly minsitry amin'ny fiangonana ara-pahasalamana. Nefa koa aho amin'ny fahalemena namely. Sarotra ho an'ny vahiny mba hilaza aho indraindray, satria toa manao izany zava-tsoa maro. Fa raha ianao ihany no afaka nahita kely kokoa.
Manana Rera-dava aho. fantatro, Tsy mbola nandre izany eo anatrehan'i na. Angamba izany no antony rehefa namely ahy dia nahatsapa bebe kokoa toy ny sucker totohondriny noho ny voalamina bout. Tany am-piandohana dia tena sembana me- hifoha ihany aho nandritra ny enim-ora isan'andro, ary reraka ny valo ambin'ny folo hafa. Nandritra ny taona manaraka izany no mahazo tsara kokoa, fa mbola nandao ahy ny akorany izay aho taloha mba ho. Nipetraka aho fito taona farany tamin'ny neverending havizanana. Amim-pahatsorana aho tsy afaka mahatsiaro fotoana farany dia nahatsapa toy ny bateria rested- maty, fa tsy recharged.
Angovo dia tahaka ny solika fa ny hery rehetra faritra ny fiainantsika. Mila azy io ny asa rehetra, resaka rehetra, ny hevitra rehetra. Ary rehefa izany dia ambany solika, ny zava-drehetra mijaly. Noho ny antony, ny tena dia tsy hamela ahy refuel. Fa tsy tsara ny tanky mbola nijanonjanona ambony “E,” ary miezaka ny hanao izany amin'ny alalan'ny. Izany dia midika hoe nandao ahy vahoaka mikotringa amin'ny alalan'ny faritra rehetra eo amin'ny fiainako.
Lazaiko anareo rehetra izany, tsy noho ny fiaraha-miory, fa ny fanamby Ahoana ny hevitrao. Ny sasany dia mety hijery ny hita fe-potoana, ny mahakivy andro, ny tsindraindray fifanenjanana ao amin'ny fanambadiana, ary mieritreritra, “Man, bandy io no very fotoana izao.” Izany antoka mahatsapa toy ny very aho raha tsy maintsy manova ny fiainako indray drafitra na lazao ny zanako, “Daddy reraka loatra ny milalao amin'izao fotoana izao.” Ho mandainga aho raha nilaza fa tsy mahakivy sy ny fiezahana. Na izany aza, Mbola milaza ny mamy fandresena.
No, Aho ny mahery noho ny olombelona tsy matanjaka karazana mpandresy; Tena tsara tarehy aho malemy. Aho hafa karazana mpandresy. Ary Miahiahy aho maro aminareo loatra.
Izaho no manana ny fandresena, nefa tsy noho ny heriko no antoka izany. Ny fandresena mitranga na dia eo aza ny fahalemena, dia ny fahotako. Aho tsy ny mpandresy izay nandresy ny fahavaloko, ary nahazo ny fandresena; Tena vao nandray azy. Manana fandresena an 'i Jesoa.
Paoly mametraka izany toy izao ao amin'ny Romana:
Araka ny voasoratra, "Fa noho ny aminao no namonoana ho mandrakariva; isika dia heverina ho toy ny ondry hovonoina. "No, amin'ny rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'ilay tia antsika” (Romanina 8:36-37).
Paul Nanonona ny Salamo 44, izay ny Mpanao Salamo mitaraina noho ny fanampian'Andriamanitra eo amin'ny fitsarana. Ary Paoly dia mampiasa ny andinin-mba hahatonga ny fotoana fa tsy misy afaka manafoana ny zavatra nataon'Andriamanitra ho antsika ao amin'i Kristy.
Ny iray amin'ireo zavatra manaitra indrindra dia ny hoe rehefa misy io zava-mahatsiravina: ho faty, rehefa novonoina, Hoy i Paoly na dia amin'izany zavatra isika mpandresy. Na dia rehefa very, isika mandresy. Na dia isika ho resin'ny amin'ity tontolo lavo ity, mitoetra ho mpandresy isika amin'ny alalan'i Jesosy. Ny kely ady isan'andro dia tsy mamaritra ny lahatra, satria ny ady dia efa nandresy. Tsy izay mitondra anareo fanantenana tsy mampino? Raha ianao ao amin'i Kristy, tena tsy very.
Angamba, toa ahy, ianao ao aloha ny fahasarotana lehibe. Tiako ny mampahery anareo amin'ny fomba vitsivitsy no mieritreritra izany fahamarinana izany.
1. Aza fotsiny Jereo Ianao
Rehefa mandany ny andro mifantoka amin'ny ny fahalemeko sy ny nimenomenona tao am-poko, Izaho ihany no hiandry ny fahakiviana sy ny solika ny heviny diso ny fahaverezam-panantenana. Rehefa mibanjina ahy aho Heveriko Very, fa rehefa mibanjina Jesosy Tsaroako fa mandresy. Ary raha nandresy ny fahavalony, dia nandresy azy ireo ho antsika.
2. Aza Jereo fotsiny izao
Raha izaho ihany no mifantoka amin'izao fotoana izao, na izao taona vitsivitsy lasa, Alaim-panahy aho mieritreritra izany no fomba izany dia foana. Fa Jesosy tsy mampino nividy zavatra ho ahy teo amin'ny hazo fijaliana izay efa tsy expereienced mbola. Dia mbola tsy mahalala an'Andriamanitra aho ankehitriny, fa hahafantatra Azy tanteraka tatỳ aoriana. Ho mihitsy aza izy hanome ahy ny marika vatana vaovao sy hamafa ny ranomaso rehetra.
Afaka ihany koa ny halaim-panahy mba hifantoka amin'ny ireo izay toa tsy mandresy izao. Ireo izay tsy manana ny mitovy fizahan-toetra sy tsy fahombiazana izay foana toa hamely antsika. Fa ny ekipa izay no nandresy teo amin'ny lafiny fahatelo dia tsy foana ny ekipa izay mandresy amin'ny farany. Maro ny olona toa ho fandresena ny ady isan'andro, nefa tsy natoky ny Izay no nahazo ny ady. Aza mijery fotsiny izao.
Michael Jordan mbola iray amin'ireo lehibe indrindra sy malaza indrindra hatramin'izay mpandresy isika nahita. Fa misy Fandresena lehibe ho nanan-. Ary tsy izahay no zavatra ilaintsika mba handresy ny ady ny tenantsika; Kristy irery ihany no afaka manao izany. Izy no resy ny fahavalontsika rehetra ho antsika: tsy misy, i Satana, ary ny fahafatesana. Rehetra fa mitaky ny hanatevin-daharana ny ekipa dia Hahasoa Anao ny Fandresena dia mivily amin'ny ota sy matoky ny Mpamonjy. Na iza na iza, na dia ny osa indrindra eo amintsika dia afaka ny ho mpandresy.
Izany no fahamarinana izay tao am-poko aho, rehefa nanoratra ireo teny ireo ao amin'ny “Sweet Fandresena”:
Ny mpandresy dia tsy ilay mandresy ny fahafito inning
Ny amboara dia tsy mandeha any ireo izay nahazo tsara fiandohana
Raha hoy Izaho no mandresy tsy hoe androany aho amin'ny
Tiako holazaina tamin'izany andro izany, rehefa mihamanjavona ny fotsy lanitra avy, dia mandresy aho ', izaho-manjaka aminy
Ataovy azo antoka mba haka ny dika mitovy “Mitsangàna” rehefa avy 10.27.14!
Liam • Oktobra 23, 2014 amin'ny 12:44 PM • navalin'i
Trip foana aho nilalao fandresena mamy tsy hampitsahatra ny roa andro lasa, Ny asa eo amin'ny fiainanao ary handeha ho miasa noho ny rakikira. Mivavaka ho anareo
Emerson Tillman II • Oktobra 23, 2014 amin'ny 1:08 PM • navalin'i
Andriamanitra anie hitahy anao Bro.
Victoria Jones • Oktobra 23, 2014 amin'ny 1:17 PM • navalin'i
Izany no mitondra aingam-panahy toy izany ny teny. Ny hira maneho mazava ny fifandraisana misy eo voninahitra be pitsiny fotoana, ary voafehy fandrika. Misaotra anao. Aho ankehitriny fantatro fa ny zava-drehetra, tsara sy ny ratsy, midina avy amin'ny Rain'ny fanazavana.
ny zava-drehetra • Oktobra 23, 2014 amin'ny 1:48 PM • navalin'i
Vakio ny Great! Aho ka mampahery izany! Adala aho ny hira!
Steve • Oktobra 23, 2014 amin'ny 3:43 PM • navalin'i
Trip, izao fihirana izao no fitahiana lehibe teo amin'ny fiainako izany efa! Raiko sy Rahavavy manana olana ara-pahasalamana izay efa mifandray amin'ny nandritra ny taona maro sy ny famaritana ny antony sy ny fomba nanoratra ity hira ity dia tsara tarehy sy mampahery. Misaotra anao ho mahatoky amin'ny finoana sy ho amin'ny filazantsara.
Nathan • Oktobra 23, 2014 amin'ny 5:06 PM • navalin'i
Talanjona aho fa ny toe-tsaina mbola mafy mandritra ny fahalemena. Ny tena modely.
Lydia • Oktobra 23, 2014 amin'ny 10:41 PM • navalin'i
Izany no tena nampahery ahy. Ny hery no miaraka amin'izay koa lenta tahaka anao nandritra ny roa taona… Aho tamin'ny farany voan'ny aretin'i Lyme mitaiza roa volana lasa izay, ary ny harerahana dia farany nahazo maivana! Manantena aho fa amin'ny farany dia afaka mahita zavatra izay manampy anao! Manao izany ianao toy izany dia mihoatra lavitra noho ny olona mahatsapa. Fitaovana ho anao! Ianao aingam-panahy ho ahy :)
Cheyenne • Oktobra 23, 2014 amin'ny 11:52 PM • navalin'i
Ny rahalahinao manana mitaiza harerahana ary tiako ho fantatra raha afaka roa ka hahazatra anao ka dia afaka miresaka aminao?
Denise • Oktobra 24, 2014 amin'ny 1:41 aho • navalin'i
Andriamanitra anie hitahy anao Mr. Barefield. Efa tokoa aho fitahiana mijery ny toriteniny, mihaino ny mozika, mamaky ny lahatsoratra sy Lahatsoratra. Izany no vavaka ataoko fanasitranana fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mahery ny vatanao. Mivavaka aho mba ho tanjaka sy fiaretana foana hanendry anao mba hahafahanao manao andrianan'ny miasa tsy mitombo reraka fa kosa ho havaozina isan sy isan'andro. Mivavaka aho mba fitahiana anareo, Jennifer sy ny zaza amim-behivavy roa. Misaotra anao aho Tompo noho ny Williams mankatò ny antso eo amin'ny fiainany amin'ny maha-mpitandrina, lehilahy, ray sy ny artista. Aoka ny fahazavanao hamirapiratra hatrany alalan'i ny fiainany. Misaotra anao Ray, amin'ny anaran'i Jesoa, Amen.
Duran Lowery • Oktobra 24, 2014 amin'ny 12:32 PM • navalin'i
Aho mpino marina. Ao amin'ny fiaraha-monina ankehitriny fa tena mora ny mahazo lafiny manahy ny fomba fanarahan'ny olona hafa miaina ny fiainany. Tsy afaka hiandry ny RISE ho avy avy. Trip U tena no aingam-panahy ahy mba ho ny tsara indrindra ny rainy ny olona ho vadiny ny ankizy.
Patrick • Oktobra 24, 2014 amin'ny 12:49 PM • navalin'i
Trip, Misaotra noho ny fizarana ny fo no. Ny zava-misy no mijaly, ary mbola afaka mamokatra tsara toy izany ny asa dia aingam-panahy. Andriamanitra no tena nampiasa ny mozika mba teneno ny fiainako. Ary Tena misaotra azy aho ry zalahy misy tahaka anao amin'ny mozika (manokana hip-hop) orinasa izay tsy matahotra ny tena fahamarinana. Manantena aho fa tsy Mitsangàna ny rakikira farany, fa raha, Tena faly aho noho izay rehetra efa nampianatra ahy ianareo amin'ny taloha 4 Albums.
Vince • Oktobra 24, 2014 amin'ny 1:00 PM • navalin'i
Foana aho nampahery ny lahatsoratra Rahalahy Ary izao mety ho ny tsara indrindra mbola iray! Mivavaka aho noho ny hery sy tsy miandry ny polisy ny rakikira!
Charlana • Oktobra 24, 2014 amin'ny 1:16 PM • navalin'i
Tena mankafy ny hira “Sweet Fandresena”, dia nisy fitehenana teo an avereno & Tsy andriko izay mandre ny sisa amin'ny CD. hotahian'andriamanitra anie ianao & ny fianakavianao & fahombiazana ho anao foana!
Chester • Oktobra 24, 2014 amin'ny 1:26 PM • navalin'i
Vao haingana aho no nahita ny zava-bitany raha ianao eto Denver Oktobra faha-9. Tsy noeritreretiko mihitsy ny momba ny fahasalamanao aretina mandra-dia. Nanohina lalina ny foko rehefa nahatanteraka ny hira “Sweet Fandresena.” Izaho koa dia efa nisy aretina ara-batana isan-karazany miady akaiky ny fotoana ny efa-taona. Noho izany, ny hira resonanted amiko, mitondra ahy ho any amin'ny saika ny ranomaso. Raha vao mamaky ny sombin eo amin'ny aretinao, Dia hitako fa efa mijaly noho ny toy izany no efa nandritra ny fotoana: Mitaiza havizanana Syndrome. Tamin'ny alalan'ny ady ara-batana aho izany, ka nahatonga ahy ho reliquish ny avonavona sy ny fiainam-po ka nitondra ahy niverina indray ny fanoloran-tena ho an'i Kristy; farany, Feno fankasitrahana aho fa izany dia tonga tamiko. Efa nihaona ihany no olona iray hafa izay manana hevitra marina tsara ny zava-tsarotra izay mitondra aretina ity. Efa handro ny nandatsahana ny fahasoavan'Andriamanitra, vavaka avy amin'ny olon-kafa, ary ny fanoloran-tena tsy mihozongozona ny vadiko izay manampy ahy hanohy amin'ny fikasan'Andriamanitra araka izay hanohy ny fianarako any amin'ny asa fanompoana ho toy ny filozofa. Isika manompo Andriamanitra, izay tsy mahatakatra akaiky ny fijaliana 'izao tontolo izao, fa naharesy ny alalan 'izany. Misaotra anao noho ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny famoahana ny fanjakan antsipiriany ny fiainanao.
kristiana • Oktobra 24, 2014 amin'ny 1:51 PM • navalin'i
Trip! Efa Nampahery noho ny mozika sy ny lahateny Bro! Andriamanitra tia ny fomba mampiasa anao! Ny bangers mahazo ahy goin Bro ! Aho no mivavaka ho anao koa! Oh ary -good hijery izany hira koa!
Mitch • Oktobra 24, 2014 amin'ny 2:31 PM • navalin'i
Andriamanitra anie hitahy anareo aho noho ny finoana tsy azo hozongozonina, ary matoky fa Izy no hanasitrana anao sy hahatonga anao manontolo, amin'ny tena Shweet Fandresena!!! Anie ny fahasoavana anie Andriamanitra…
Mack Ender • Oktobra 24, 2014 amin'ny 2:43 PM • navalin'i
Izaitsizy aho nitso-drano avy amin'ity lahatsoratra ity. Faly ny foko tahaka ny mamaky sy misaintsaina ny hoavy lova ao amin'i Kristy. Misaotra anao hamandrika. Tsy Andriko ny mahazo ny tahirin-tsary. Foana aho notahin'ny lehilahy.
Erica D. Clanton • Oktobra 24, 2014 amin'ny 3:43 PM • navalin'i
Izany no tena zavatra nilaiko mba hamaky sy Sweet Fandresena tena manohina ny foko. Misaotra nizara Trip fa izay nomen'Andriamanitra U mba hahafahantsika mahita ny fahitana ny amin 'ny fiainantsika!! Mivavaka ho U!
Isaia • Oktobra 24, 2014 amin'ny 4:05 PM • navalin'i
Tiavo ny mozika ny olona. Tsy nahatapaka ranjo sy ny kristianina dia manana ny mozika hop izahay ary ary hitohy hanampy Andriamanitra hanova ny fiainako. Ny tolona dia tsy ho mandrakizay araka ny fantatrao tsara tripp. Misaotra ny fampahatsiahivana.
GabeTaviano • Oktobra 24, 2014 amin'ny 5:50 PM • navalin'i
Misaotra noho ny mangarahara, Trip. Ny fam ny fihetsehan'ny an'i Kambodza tamin'ny Janoary faha-3. Manan-teny kely fanontaniana ho anao manokana, manantena ny manontany mialoha ny handao. Afaka angamba hitifitra ahy mailaka (ny mailaka aho taloha hevitra eto)? Miandrandra ny ahy mba mialoha ny RISE. Tena asa lehibe!!
ChristyCapp • Oktobra 24, 2014 amin'ny 11:05 PM • navalin'i
Izany aho mijery’ Mandefa ny raki-kira!! Thats lehibe hira hanombohana azy eny amin'ny. Marina talenta sy ny tena tononkira izay hanova ny fiainana.. Tsy nothin’ tsara lavitra noho ny! CFS sucks ary manimba. Nahazo izany aho amin'ny 18 tany amin'ny oniversite, rehefa izany voalohany ka. Kanefa afaka mandresy azy io, ary ianao sy ny sakafo tokony will..with excercise. Dia misy fanantenana! vavaka aloha, rano isaky ny ora. Izaho efa nanao rano namako akaiky indrindra ny Detox, manapaka lafarinina fotsy, paty sy ny fifadian-kanina sakafo. Ny ankamaroantsika dia walkin’ manodidina dehydrated ary nosoloana bebe kokoa azy amin'ny sakafo. Izany alalan'ny fitsapana nianjady tamintsika izay miasa ao amintsika ny tena. Amin'izany andro izany ny hoe marary (mbola) dia raha Andriamanitra no tena afaka manao ny asany… Firariantsoa tsara indrindra ho anao sy ny rakikira sy ny fam sy ny fiangonana & be fitohizan'ny fahombiazana!
Jesosy • Oktobra 25, 2014 amin'ny 6:00 aho • navalin'i
Awesome lalin-tsaina, ho inona ho amin'izao tontolo izao no mahita antsika toy ny “very” eto amin'ity fiainana ity. Rehefa amin'ny tena zava-misy rehetra isika teraka rehetra resy, anisan'izany ireo, fa izao tontolo izao mihevitra “mpandresy”..! raha, tsy tonga any amin'ny “fahalalana” na “mahalala” ny FAHAMARINANA, izay “JESOSY”, mitoetra ho resy izy ireo ..! Na dia, ho an'Izao Tontolo Izao, dia toa ho mpandresy ..! Misaotra noho ny fizarana ny “fahalemena”, raha ny marina, ianao efa nanao STRONGE ..!! Isaorana anie ny Tompo, fa ho nampahafantarina antsika ny fahalementsika amin'ny alalan'ny fa tena STONGE, satria mahalala Azy…!! Tandremo nibosesika hatrany namako sy rahalahiko na dia ny Tompo ihany no manome anareo ny fahasoavany ao amin'ny zavon 'ny ny tolona ..!! Mivavaka ho anareo ..!
Ashley • Oktobra 25, 2014 amin'ny 9:16 aho • navalin'i
Tsy noeritreretiko mihitsy ianao miatrika ady ity. Namaky ny boky, “ny fiainana tsara” ny fotoana kelikely indray, fa tsy mahatsiaro nahita fa. Dia voatahy aho noho ny lahatsoratra androany, ianao amin'ny fivavahako rahalahy. Havanay voan'ny aretina mitaiza sy ny harerahana izany tena sarotra ho azy ny hahazo zavatra izy taloha. Misaotra anao nizara, ny foko mivoaka ho aminao sy ny vadiny amin'izao fotoana izao. Miadia ny ady tsaran'ny. Ianao dia tena Tompon-daka. Jesoa fitiavana mandresy rehetra. P.s. dope hira koa!
Rachel • Oktobra 25, 2014 amin'ny 10:36 aho • navalin'i
Tena faly aho noho ny Sweet Fandresena. Nihaino tao amin'ny YouTube aho ary nanome ahy ny kilalaon'afo indray. Efa miady mafy amin'ny fahakiviana. Heveriko fa very ny fanantenako aho eto mandritra ny herinandro vitsivitsy. Tsy afaka mieritreritra ny fomba hafa mba hametraka izany. Namoy Fo Taloha Nefa nahatonga ahy hahatsapa tapaka avy amin'Andriamanitra ary ny ratsy indrindra ampahany rehetra. Aho mitaraina aminy, mangataka aminy mba hanampy ahy amin'ny mahery vaika ity mamoy fo. Ny Sweet Fandresena tonony niteny mahitsy ho torotoro io ampahany amiko sy retriggered ny fanantenako. Ity lahatsoratra ity ihany koa ny nampahery ahy. Andriamanitra no tena tsara. Manodidina ahy ny olona tia ahy any am-piangonana fa tsy nanan-kevitra ny fomba hangataka azy ireo fanampiana, na ny fomba hanazavana ny zavatra handeha aho alalan'i. Andriamanitra dia nanapa-kevitra ny hampiasa anao, ny lalana rehetra avy any Texas. Misaotra anao!
Julia nifindra • Oktobra 25, 2014 amin'ny 3:01 PM • navalin'i
Trip (ary Jess)–
Misaotra be dia be noho izany hira mampahery. Tsy andriko ny hahazo ny rakikira vaovao. izahay (ny ray aman-dreniko) nanaraka fotsiny ny zazalahy kely avy any Haiti. Manana atidohany. Na dia efa mafy lalana mbamin'izay rehetra tao sembana, Fantatro fa i Jesoa manome antsika ny fandresena ny zavatra rehetra. Tsy efa hitako tao fampisehoana ao Salt Lake City, UT roa herinandro lasa izay, dia nomenareo ahy izany fanantenana. Misaotra anao!
Ary ny fiarahabana ho anao sy ny Ramatoa. ny toetra vaovao kely. na izy (na ny) teraka na tsia. :) Tiako ianareo!
ny • Oktobra 26, 2014 amin'ny 8:15 aho • navalin'i
Trip, Aho mikasika ny hatrany amin'ny vahoaka andrasana base toy ny misy afaka mahazo…Caucasian Canadian Mama dimy izay mitarika ny Mini Van! Fa blaring avy ny mpandahateny sasany foana ny rap amin'ny fihodinan'ny tapaka ny Trip Lee! Tiako ny hira Sweet Fandresena ary izany zava-misy izay birthed amin'ny fomba vaovao avy amin'ny tolona ara-pahasalamana danja lehibe ho ahy. Fa ny farany 8 taona no efa niady mafy tamin'ny fahalemena koa taorian'ny nahaterahan'i aloha loatra ny zanako vavy. Izany dia mahatonga antsika hanetry tena lalana mankany mandeha, ary ny anankiray dia mbola mianatra ny matoky an'Andriamanitra amin'ny. Misaotra anao nizara ny fanantenana sy ny fanomezana ohatra iray unashamed lehilahin'Andriamanitra ho an'ny zatovolahy mba hanaja sy haka tahaka. Fitahiana ho anao, Rahalahy!
ny • Oktobra 30, 2014 amin'ny 9:59 aho • navalin'i
Alaina ny rakikira omaly, ary tiako ilay izy! My Fav dia “Rehetra mitsangana”; Izany aho amin'ny famerenana… tpt… Misaotra noho ny mahagaga rakikira Trip. Manantena ny hijery anareo amin'ny fampisehoana indray andro.
Gabka • Novambra 7, 2014 amin'ny 8:12 PM • navalin'i
Wow. Ity no fotoana voalohany manerana ity Ndao ho avy aho ary tia ny lahatsoratra aho namaky hatreto. Aho mba toy izany no fitahiana sy encouraged.This mihitsy no nilaiko amin'izao fotoana izao ny mahalala fa na dia teo aza ny fahalemeko no mbola manjaka eo amin'ny fiainako, ary afaka mijery azy sy ho tonga mafy orina foana.
Tsy noeritreretiko mihitsy ianao mandalo izany, ianao amin'ny fivavahako. Misaotra betsaka noho ny fizarana. Andriamanitra anie hitahy anao be dia be.
Vao avy nihaino ny Sweet fandresena sy ny toy izany aho dia voatahy noho ny hira! Ary Tsy andriko hihaino ny rakikira rehetra. Azoko antoka izay ihany ho aho nihaino ireo herinandro ho avy. Tohizo ny asa tsara!
Latasha • Novambra 8, 2014 amin'ny 7:54 PM • navalin'i
Ity lahatsoratra bilaogy dia toy izany fitahiana ho ahy. matetika, Tsy mahatsiaro ho takatry ny fianakaviana, namana, fianakaviana na ny fiangonana izany mandeha, fa ity lahatsoratra ity hanampy ahy ny zava-misy sy ny fomba fijery intsony nitaraina momba ny fiainana. Tsapako fa misy fitahiana ao anatiny ny fahalementsika. Andriamanitra tokoa dia maneho ny heriny / fitiavany antsika, alalan'ny fanampiana antsika handresy ny tolona, rehefa takatsika fa Izy no hany fomba foana isika dia afaka mandeha. Misaotra ny lahatsoratra sy ny hira Sweet Victory dia mahagaga!
Grace sy Fiadanana,
TTunique • Novambra 17, 2014 amin'ny 9:42 aho • navalin'i
Nanolo-tena ny zanako vavy izao fihirana izao ho ahy. Tsy mitsahatra mihaino sy nitomany. Efa miady hery fiarovana olana ho an'ny 15 taona. Ny farany 3 taona teo akaikin'ny helo. Kanefa ny Tompo dia fiatrehana ny Foko mafy nandritra izany fotoana izany. Aho tamin'ny farany, ary nitolo-batana nahazo azy ny azy. Aho izao nahazo valiny sisa sy mety ary nivoaka tsikelikely. Tsy avy aho ny lalana rehetra, nefa aho tsy mba toy ny Reraka be aho. Mahagaga!!! ity hira ity……ity hira ity! ranomaso……
Tim • Desambra 4, 2014 amin'ny 1:56 aho • navalin'i
Foana aho mahatsapa ny fahatsapana ny fifaliana rehefa mandre hira vaovao avy aminao na mahita nandefa toriteny na mamaky ny bilaogy. Ianao fanentanana! Tsy mivantana mahalala izay CFS dia toy ny fa efa nahita izany. Fianakaviana iray avy amin'ny namana reny ny fiangonako dia manana izany. Misy fotoana rehefa mahita azy dia misy lava eny anelanelany rehefa tsy. Fa isaky ny manao hahita azy izy faly foana. Rehefa namaky izany dia nihevitra azy satria milaza azy isaky ny tena aingam-panahy aho aminy fa ao anatiny izy rehetra fiderana i Jesosy. Izy no nandresy satria tsy mety ny mieritreritra ny toe-draharaha teo amin'ny. Ianao no tena roa tena mpandresy! Faly aho fa ianao no afaka mizara ny fo aminay. Izany dia midika hoe be dia be ho ahy.
Burton • Desambra 4, 2014 amin'ny 8:54 PM • navalin'i
Tsy fantatrareo hatraiza izany dia midika ho ahy. Raha toa toy izao tontolo izao dia manohitra anao, fantatrao fa handresy ianao amin'ny farany amin'ny manidina loko! Ary ankehitriny, mahalala ny zavatra Efa mandalo ny fito taona lasa, afaka mahafantatra fa ianao no amin'ny fivavahako Bro. Misaotra nanazava ny fonao ho anay.
Femi • March 16, 2015 amin'ny 5:58 PM • navalin'i
Trip, ianao dia be aingam-panahy. RISE lehibe rakikira ary tiako izany! Toy ny momba ny fahasalamana, Mino aho fa ny lelafo vonjimaika fotsiny ny afflicton fanomanana anao ho amin'ny voninahitra izay haseho. Andriamanitra no nametraka ny hampiasa anao bebe kokoa ny rahalahy. toy izany aza nefa tsy ho sasatra. foana ny finoana sy nivavaka. Tiako ianao rahalahy.
Nate • Aprily 26, 2015 amin'ny 9:13 PM • navalin'i
Mitaiza havizanana Azom-pahoriana mandritra ny fiainako dia avy amin'ny fony aho 13 na 14 taona ny làlana rehetra hatramin'izao ihany no resaka herinandro lasa izay (aho 28 ankehitriny). Taona ny vavaka sy ny fikarohana farany nitarika ny fianakaviako, ary izaho kosa, raha ny valiny; Diet no fototry antony. Hanala ny voa, ronono, nightshades, preservatives ary ampiasaina sakafo avy ny fiainako dia nitarika ho sitrana tanteraka. Mbola tsy nahatsapa tsara kokoa.
Tsy fantatro raha misy mety ho toy izany koa ho an'ny sakafo vahaolana CFS, fa Te ho fantatrao ihany.
Tohizo ny asa tsara. Aho hivavaka ho anareo.
ThomLomas • Desambra 7, 2015 amin'ny 4:29 PM • navalin'i
Misaotra anao nizara ireo teny ireo. Naniry aho dia efa namaky izany tamin'ny herintaona, nefa tsy natao aho mba hamaky azy io hatramin'izao. Ankehitriny fa Izaho nanana fahatakarana tsara kokoa momba ny antony izany dia nanjo. mamerina ny fisaorana anao, TAHIN'ANDRIAMANITRA.
Brandon Martinez • Aprily 23, 2016 amin'ny 12:49 PM • navalin'i
Tiako ianao hamandrika Lee ianao anjara toerana lehibe modely manentana ny fanahy ny finoana ny mandeha amin'Andriamanitra. Nianatra nitoky Ive ive nianatra azy fa ny soratra masina rehefa ampiharina amin 'ny fiainako ho toy izany fitahiana amin'ny fomba maro. Tena aingam-panahy ahy ianao ary manantena aho fa indray andro any Andriamanitra hanome ahy ny fahafahana hitsena anao sy lecrae ianareo roa no nanampy ahy hahita ny fiainana, fa tsy ny fahafatesana. Isan'andro dia mihaino ny filazantsara nahatapaka ranjo hop izahay, ary manomboka ny maraina amin'ny hisaotra an'Andriamanitra noho mamoha ahy dia ho kafe ka ataovy ny bluebuds sofiko sy hiverina amin'ny filazantsara nahatapaka ranjo hop izahay ary mihaino ny fianarana mihitsy aza mazava teo teny aho, tsy fantatro ao amin'ny rakibolana amin'ny teny I dont tena hahatakatra izany no lnow ny heviny lalina kokoa satria im lalina mpandinika. Iray Mivavaha sy ny fo faniriana ny ahy dia ny hiresaka aminao amin'ny fomba iray andro na dia ny vitsivitsy monja hafatra ao amin'ny Facebook na antso an-tariby, fa ho mahatahotra hiara-mipetraka aminao mivantana ary resaho zarao ny zavatra inoan'ny Kristianina, ary valio tsirairay fanontaniana sy olana hafa. Izaho dia 26 taona marokoroko Manana fototra sy ny lasa sy Kristy nanova ahy isan'andro isan'andro noho ny rehetra, voninahitra sy lehibe kokoa tsara mba hahafahako hanampy sy aingam-panahy ny hafa miaraka amin'ny fijoroana ho vavolombelona izay mampiseho ny amin'ny zavatra tsy ara-teny . Im mpino. Romanina 1:16 Izaho unashamed ny filazantsara. I miresaka momba an'Andriamanitra ny olona everday miaraka amin'ny namako na dia mijery miakatra atỳ amiko, ary efa niova noho ny fomba nanova ahy. Tena manantena hitanao ity hafatra ity avy amiko sy namaky azy io amin'ny alalan'ny. Ny tantara dia matanjaka sy Kristy foana ao am-ponao. Masìna ianao, raha manana fotoana indray andro andinin-teny ahy. Antsoy Aho. Soraty ahy amin'ny facebook. Andefaso mailaka aho ID tia ny iray fotsiny dresaka miaraka aminao. Btw ny tantara nitondra dranomaso ny masoko. hotahian'andriamanitra anie ianao,vadinao,ary ny zanaka eny amin'izay rehetra andro sy izay rehetra ataonao.